भिडियो Archives - Khula Patra
विनोद तामाङलाई हेर्ने ‘मैच्याङ’ को हुन् ? (भिडियो)
बिहिबार, आश्विन १४, २०७८
कलाकार विनोद तामाङको भ्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । तामाङको आफ्नै स्वर रहेको ‘हेर न मैच्याङले मलाई हेरेको’ बोलको गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको हो । भिडियोमा पनि तामाङ आफैँले अभिनय गरेका छन् । उनीसँगै मैच्याङको अभिनयमा रस्मिला तामाङले अभिनय गरेकी छिन् । ‘यो मेरो प्रयास हो, कोशिस गर...
धुलिखेलमा पुष्प र प्रकृतिको रोमान्स (भिडियो)
काठमाडौँ । चर्चित गायक प्रताप दास र गायिका अस्मिता अधिकारीको स्वरमा रहेको ‘जिउनु छ साथमा’ बोलको गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । लोकप्रिय नायक पुष्प खड्का र प्रकृति घिमिरेको अभिनय रहेको भिडियो रोमान्टिक लभ स्टोरीमा आधारित रहेको छ । ज्ञानेन्द्र गिरीको शब्द तथा संगीत रहेको गीतको भिडियो सुल...
एलिना चौहान र बीरेन्द्र श्रेष्ठको नयाँ गीत, ‘घर तिम्रो कता पर्‍यो ?’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
काठमाडौं । गायक तथा इन्जिनियर बीरेन्द्र श्रेष्ठ र गायिका एलिना चौहानको आवाजमा नयाँ गीत ‘घर तिम्रो कता प¥यो ?’ सार्वजनिक भएको छ । जीवेशसिंहं गुरुङ्ग र वर्षा शिवाकोटिको अभिनय रहेको उक्त गितको भिडियोमा माया प्रेमको सामिप्यलाई देखाउन खोजिएको छ । दिपक शर्माको सङ्गीत रहेको उक्त गितको भिडियोलाई रुपे...
हरि लम्सालको गजल ‘यो शिर झुकेको छैन’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
काठमाडौँ । गायक तथा सङ्गीतकार हरि लम्सालले ‘यो शिर झुकेको छैन’ गजल सार्वजनिक गरेका छन् । कपिल अन्जानको शब्द रचना र हरि लम्सालको संगीत तथा स्वर रहेको गीतमा देश प्रेमले ओतप्रोत स्वाभिमानी नेपालीको भावना उजागर गरिएको छ । गीतको भिडियोमा शङ्कर पराजुली र आस्था बस्नेतको अभिनय रहेको छ । शक्ति प...
प्रताप दासको ‘एक्लो साँझ’ सार्बजनिक(भिडियो सहित)
काठमाडौँ । गायक प्रताप दासको सुमधुर स्वरमा रहेको नयाँ गित 'एक्लो साँझ' को म्युजिक भिडियो सार्बजनिक भएको छ। गीतमा लोकप्रिय संगीतकार शिखर सन्तोषले संगीत भरेका छन् भने बिष्णु खरेलको शब्द रहेको छ । छायाँकार योदीन योञ्जनले छायांकन गरेको म्युजिक भिडियोलाइ निर्देशक नितिन चन्दले निर्देशन गरेका हुन्। सार...
‘गोर्खे’ को टाइटल गीत सार्वजनिक (भिडियोसहित)
काठमाडौं । कोजु ईन्टरटेन्टमेन्टको ब्यानरमा हरि लामाको प्रस्तुति र तिर्थराम कोजु र हरि थापाको निर्माणमा तयार भएको चलचित्र ‘गोर्खे’ को चलचित्रमा समाबेस, मुख्य दृश्य सहित टाईटल लिरिकल गीत सार्वजनिक गरिएको छ । बुढासुब्बा डिजीटलको आफिसिएल युटुब मार्फत सार्वजनिक भएको यस गीतमा आवाज्, संगीत र एरेन्ज शास ...
‘फर्क राजा’को माग गरिएको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक (भिडियो)
काठमाडौँ । सडकमा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको मा गर्दै विभिन्न आन्दोलन भइरहेका बेला राजतन्त्रको माग गरिएको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ । गीतमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र कोमल ओलीलाई पुनः राजगद्दीमा फर्कन अनुरोध गरिएको छ । ‘फर्क राजा फर्क’ बोलको गीतमा अर्जुन खड्काको शब्द तथा संगीत रहेको छ ...
निशान र रचनाको नयाँ गीत ‘जीन्दगीको आभाष’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
काठमाडौं । गायक निशान भट्टराई र गायिका रचना रिमालको नयाँ गीत जिन्दगीको आभाष सार्वजनिक भएको छ । गीतमा शब्द सुदिप लम्साल र संगीत कमल खत्रीको रहेको छ । गीतको संगीत संयोजन रिकेश गुरुङले गरेका छन् । भिडियोमा निर्देशक केशव प्रसाद रिजाल कोरियोग्राफर सुनिल क्षेत्रीको रहेको छ । भने सिनेमाटोग्राफर, सम्प...
काठमाडौं । गीतकार, कलाकार तथा सामाजिक अभियन्ता भूमिका सुब्बाको नयाँ गीत ‘बनचरी’ सार्वजनकि भएको छ । ओएसआर डिजिटल युट्युब च्यालनबाट बिहिबार रिलिज गरिएको हो । गीतमा एउटी नारीको जीवन यात्रालाई समेटिएको छ । एउटी छोरीले जन्मदिने आमाप्रति दर्शाउने अगाध प्रेम र माईती गाउँको ‘नोस्टाल्जिया’ गीतमा प्रस्तुत ...
एलिना र कृशलको नयाँ गीतमा देखियो जीवन्त अभिनय (भिडियोसहित)
काठमाडौँ । पछिल्लो पुस्ताकी लोकप्रिय गायिका एलिना चौहानको नयाँ गीत कोसेली फूलको थुँगाको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । पछिल्लो समय कृशल र एलिनाको जोडीलाई गायनका अलावा अभिनयमा पनि रुचाइएका कारण यो जोडी कोसेली फूलको थुँगाकोमा पनि कलात्मक अभिनय गर्न सफल भएको छ । बेलायतमा बसेर गीत गजल लेखनमा सक्रिय नृ...
तेह्रथुम । कलाकार विनोद तामाङ र शिखा पयाङ्गुको अभिनय रहेको ‘मैले माया लाएको’ बोलको गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । गायक टंक लिम्बुको स्वर, भद्रकला आङबुहाङ राईको शब्द र बादल लिम्बुको संगीत रहेको गीतको भिडियो युट्युव च्यानल मार्फत बिहीवार सार्वजनिक गरिएको हो । गरिबीको कारण भरखरै घरजम गरेको...
काठमाडौँ । सञ्चारकर्मी ईश्वरी बरालको ‘नरिसाउन होइ’ सार्बजनिक भएको छ । सुरज गैह्रे विवसको शब्द रहेको गीतमा सञ्चारकर्मी बराल र राजेन्द्र भट्टको स्वर रहेको छ । राजेन्द्र स्वयंमको संगीत रहेको गीतले माया गर्ने जोडीहरुमा उत्पन्न हुने शंकाको बिषयमा चर्चा गर्न खोजिएको छ । गीतको म्युजिक भिडियोमा...
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली लोक तथा दोहोरीको क्षेत्रले फड्को मारेको छ । गीत भन्नै वित्तिकै रक, पप, आधुनिक र फिल्मी गीतलाई मात्रै बुझिने नेपाली समाजमा केही बर्ष यता लोकदोहोरी गीतलाई धेरै सुन्न र हेर्न थालेका छन् । लोक तथा दोहोरी गीतमा प्रयोग भएका मौलिक लय र शब्दका कारण यसको गरिमासमेत बढेको छ ...
नेता वामदेव गौतमले रचना गरेको गीत सार्वजनिक (भिडियो)
काठमाडौं । नेकपाका शीर्ष नेता बामदेव गौतमले लेखेको गीत सार्वजनिक भएको छ । ‘यो मुक्त भूमि हो बुद्ध भूमि’ बोलको गीत शुक्रवार युट्युबमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । राष्ट्रभक्तिका शब्दले ओतप्रोत यो गीतमा संगीत पनि नेता गौतम र शम्भुजीत बास्कोटाको संगीत छ । संगीत संयोजन भने मनोहर सुनमले गरेका हुन् ।...
‘नेपाल आइडल’का किरण भुजेल, खाली पेटदेखि ‘टप थ्री’ सम्मको संघर्षको कथा
काठमाडौं । कोरोना महामारीका बीच ‘नेपाल आइडल’को तेश्रो संस्करणको फाइनल चरण यही साता पूरा हुने भएको छ । एपी वान एचडीबाट प्रसारण हुँदै आएको नेपाल आइडलको पहिलो र दोश्रो संस्करण सफल भइसकेका छन् भने यही साता तेश्रो संस्करणले पनि विजेता पाउनेछ । फाइनल प्रतिष्पर्धाकालागि अब किरणकुमार भुजेल, सज्जा चौंलागाई...
‘पिरिम नलाउनेको’ सफलतापछि आयो ‘गलबन्दी पच्छ्यौरी’ (भिडियो)
काठमाडौं । नेपाली म्युजिक भिडियो इतिहासमै युट्युबमा सर्वाधिक हेरिएको म्युजिक भिडियो पिरिम नलाउनेको सफलता पश्चात गायक आशिष सचिनको अर्को प्रस्तुती ‘गलबन्दी पच्छ्यौरी’ सार्वजनिक भएको छ । पिरिम नलाउने समूहकै सहभागितामा गलबन्दि पच्छ्यौरी तयार भएको हो । कोभिड १९ को प्रभावको बीच सामाजिक दूरी र सतर्कता अ...
समुन्द्रको ‘अधुरो प्रेम कहानी’ सार्वजनिक (भिडियो सहित)
काठमाडौँ । गायक समुन्द्र खतिवडाले आफ्नो बिल्कुलै नयाँ गीत ‘अधुरो प्रेम कहानी’ सार्वजनिक गरेका छन् । हाल युएई मा रहेका गायक खतिवडाले कोरना कहर बिच नेपाली गीत संगीत प्रेमीहरुलाई मनोरंजन दिन म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरेका हुन्। सेण्टिमेण्टल भर्सनको यस गीतमा स्वर समुन्द्र खतिवडाको रहेको छ भ...
सहिमाको ‘मोयाले’ मा रमाउँदै बिक्रम (भिडियो सहित)
काठमाडौँ । लोकप्रिय गायिका सहिमा श्रेष्ठ तथा गायक बिक्रम रानाको नयाँ गित “मोयाले” को म्युजिक भिडियो सार्बजनिक भएको छ । नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा चर्चाको शिखरमा पुग्न सफल तथा एक पछि अर्को राम्रो राम्रो गितहरु नेपाली सांगीतिक बजारमा पस्केर सम्पुर्ण नेपाली गित संगीतको पारखिहरुको रोजाइमा पर...
कलाकारहरुको एउटै आवाज ‘हाम्रो भुमि फिर्ता गर’ (भिडियो)
काठमाडौं । भारतीयले सडक निर्माण गरेको नेपालको लिपुलेक कालापानी क्षेत्रलाई फिर्ता ल्याउनका लागि सबै नेपालीलाई एकजुट गराउनका लागि सांगीतिक अभियान मार्फत् गायक गायिका तथा कलाकारहरु एक जुट भएर अघि बढेका छन् । गायक नेत्र भण्डारी, कृष्ण केसी, गायिका मिना लामा र सिता केसी को आवाजमा रहेको ‘हाम्रो भुमी फि...
सञ्चारकर्मी बस्यालको सन्देशमुलक गित ‘जित्छौं हामी’ सार्वजनिक (भिडियो)
पोखरा । मेन मिडियाको प्रस्तुतीमा गायक विनोद वानियाको आवाजमा सन्देशमुलक गित ‘जित्छौ हामी’को भिडियो युट्युब मार्फत सार्वजनिक भएको छ । गितको भिडियो मार्फत नेपालका चर्चित राजनितिज्ञ , कलाकार, खेलाडीहरुले नेपालीसंग जितको लामो इतिहास रहेको भन्दै सकसपूर्ण दिनलाई जित्न सक्छौं भन्ने सन्देश दिएका छन्। भिड...
सलमानले गाएको ‘तेरे विना…’ गीतले एक हप्तामै पायाे पौने तीन करोड भ्यूज (भिडियो)
काठमाडौँ । लकडाउनमा बलिउड अभिनेता सलमान खानको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । ‘तेरे बिना’ को म्युजिक भिडियोमा अभिनेता सलमान र ज्याकलिन फर्ना्न्डिजको अभिनय रहेको छ । गीतको भिडियोमा उनिहरु दुबै घोडा माथि मस्ति गरेका छन् । सब्बिर अहमदको शब्द र आदित्य देवको संगीत संयोजन रहेको यस गीत आइतबार सार...
‘मलाई कालापानी हेर्न मन छ’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
आइतबार, जेठ ०४, २०७७
काठमाडौँ । अस्मिन घिमिरेको शब्द तथा स्वरमा रहेको ‘मलाई नालापानी, लिपुलेक हेर्न मन छ’ बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ । भारतले नेपालको भूमी मिचेर सडक बनाएको खबर सार्वजनिक भएसँगै अहिले नेपाली भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने माग चौतफी रुपमा उठेको छ । कपिल घिमिरेको संगीत रहेको यो गीतको भिडियोलाई भोल...
करोड क्लबमा ‘माया जदौ’ (भिडियोसहित)
काठमाडौं । समसामयिक हाँस्य कथामा निर्माण गरिएको फिल्म ‘हिजो आजका कुरा’ को ‘माया जदौ’ बोलको गीतले एक करोड भन्दा बढी भ्यु पाएको छ । दुई महिनाअघि सार्वजनीक भएको गीतले दर्शकको उत्कृष्ट प्रतिक्रिया सहित चर्चा पाइरहेको छ । साकार पन्तको डेब्यु निर्देशनमा बरिष्ट हास्य कलाकार सन्तोष पन्त निर्मित ‘हिजो आजक...
अस्मिता पाण्डेको ‘जुनी जुनी’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
काठमाडौँ । अस्मिता पाण्डेको स्वरमा गीत ‘जुनी जुनी’ सार्वजनिक भएको छ । गीतमा सारिका घिमिरेको शब्द र योगेश काजीको संगीत, संगीत संयोजन रहेको छ । भिडियोको छायांकन तथा निर्देशन निरज तिमल्सिनाले गरेका छन्। भिडियो हेर्नुहोस् : https://www.youtube.com/watch?time_continue=111&v=g_3mq2VOH_c&...
आगलागी हुनुभन्दा पहिलेको सक्रान्तिबजार (भिडियोसहित)
तेह्रथुमको सक्रान्तिबजारमा ०७३ साल पुस १ गते आगलागी भएको थियो । आगलागीमा परी यहाँका २४ घर जलेका थिए । अन्य ५ घरमा क्षति पुगेको थियो । आगोबाट घर र धनमालको गरी १४ करोड ८ लाख रुपैयाँको क्षति भएको थियो । आगलागीबाट ७३ परिवार विस्थापित भएका थिए । आगलागी हुनुभन्दा अगाडिको सक्रान्तिबजार । हेर्नुहोस् ...
झुमा वनेमको स्वरमा पालम ।। Palam by Jhuma Wanem Limbu
लकडाउनमा रोमाण्टिक मुडमा भेटिए केकी र बिजेन्द्र (भिडियोसहित )
काठमाडौँ । कोरना कहर बिच नेपाली गीत संगीत प्रेमीहरुलाई संगीतको माध्यम बाट मनोरंजन दिन गायक सुब्रत रेग्मीले आफ्नो बिल्कुलै नयाँ म्युजिक भिडियो ‘पुरा हुन जिन्दगी’ सार्वजनिक गरेका छन् । रोमाण्टिक भर्सनको यस गीतमा मानिस एक रहन असल छैन ,जिन्दगी जिउन साथी चाहिन्छ भन्ने भाव व्यक्त गरिएको छ । गीतमा स्...
‘शंकाले लंका जलाउँछ’ (भिडियो सहित)
शुक्रबार, बैशाख ०५, २०७७
काठमाडौं । नेपाली सुगम संगीतमा सर्वाधिक रोजाईमा पर्न सफल गायिका सुनिता थेगिमको आवाजमा रहेको ‘शंकाले लंका जलाउँछ’ गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । प्रेम र जिवनका विविध आरोह अवरोहहरुलाई गीतमा समेटिएको छ । गीतमा प्रेमलाई नजिक बाट ब्यक्त गरिएको छ । मायालु प्रेमील जोडीको मनको भावनालाई गीतमा समेटिएको का...
सुचिन्दाको ‘एकचोटि आइदेउन’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
काठमाडौँ । गायिका सुचिन्दा श्रेष्ठको आवाजमा रहेको “एक चोटि आइदेउन” बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । चर्चित मोडेल सृष्टी खड्का र नायक सन्जीव थेबेलाई फिचरीङ गरिएको भिडियोमा निशान घिमिरेको निर्देशन रहेको छ । अमन प्रधानको लय र राहुल प्रधानको एरेन्ज रहेको गीतलाई हाईलाईट्स नेपाल युट्यब च्यानलबाट...
खेम र बिनोदले एक साथ यति धेरै कलाकारको साथमा ल्याए, ‘कहिले आउँछ पालो सरकार ?’
https://www.youtube.com/watch?v=aMu_y7MzKXE&feature=emb_logo काठमाडौँ । खेम सेञ्जुरीको ‘कहिले आउँछ पालो सरकार ’ गीत बजारमा आएको छ । थुपै्र कलाकारहरुलाई एक साथ ल्याएर निर्देशक विनोद भण्डारीले गीतको म्युजिक भिडियो निर्देशन गरेका छन्। अविरल बीसीको शब्दमा रहेको गीतको लय खेम सेञ्जुरीले...
मेलिना राईको ‘मेहेन्दी’ मा प्रिय‌ंकाको डान्स (भिडियोसहित)
काठमाडौँ । मंसिर महिनालाई बिहेको महिना पनि भनिन्छ । अहिले चारैतिर बिहेको माहोल चलिरहेको बेला हाल अमेरिकामा रहेका गीतकार तथा संगीतकार सुरेश घोन्डे गुरुङले " मेहेन्दी " बोलको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरेका छन । गीतमा आफ्नो प्रिय मान्छेको नाममा मेहेन्दी लगाउने केटी मान्छेको उत्सुकता , चंचलता , प्र...
एलिसा र जितेशको ‘पहिलो भेटमै आँखा जुध्यो’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
काठमाडौँ । नाम जस्तै मिलनसार र आकर्षक व्यक्तित्वका धनी गायक मिलन सुर्खेतीले आफ्नो बिल्कुलै नयाँ म्युजिक भिडियो “ पहिलो भेटमै” लिएर स्रोता र दर्शक माझ आएका छन्। यस गीतमा स्वर तथा संगीत मिलन सुर्खेतीको रहेको छ भने गीतका शब्द योगेन ढोलीले लेखेका हुन । गीतको संगीत संयोजन रिकेश गुरुङ “किज”ले गरेका हुन...
वर्षा सिवाकोटीको ‘तिमी भएर’ सार्वजनिक (भिडियोसहित )
काठमाडौँ । नेपाल आइडल सिजन १ मा उत्कृस्ट पाँचसम्मको यात्रा तय गर्ने एकमात्र महिला प्रतियोगी सुजाता पाण्डेले आफ्नो बिल्कुलै नयाँ गीत "तिमी भएर"को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरेकी छिन ।आधुनिक र पाश्र्व गीतगायनमा रुचि राख्ने सुजाताले यसपटक रोमान्टिक भर्सनको तिमी भएर गीत सार्वजनिक गरेकी हुन् । यसघि...
मेलिनाको गीतमा सुपुष्पाको रोमान्स (भिडियो सहित)
काठमाडौँ । गायक विक्रमजंग शाह र गायिका मेलिना राईको ‘टिलपिल टिलपिल तारा।।।’बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । गीतमा सुमन श्रापितको शब्द, जीवन परियारको सङ्गीत र सुदिप सागरको सङ्गीत संयोजन रहेको छ । रोहन असिबको कोरियोग्राफ, शिवराम श्रेष्ठको छायाँकन रहेको उक्त म्युजिक भिडियोमा सुपुष्पा भट्टले रोहन असि...
सुष्मा अधिकारीको अहिलेसम्मकै हट भिडियो सार्वजनिक (भिडियोसहित)
काठमाण्डौँ । चर्चित मोडल एवम् नायिका सुष्मा अधिकारीले पहिलो पटक हट विकिनीमा प्रस्तुत भएको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । गायक सपन श्रेष्ठ स्वरवद्ध तथा रेपर प्रिन्स राज फिचर भएको “लै बरी लै” बोलको नयाँ गीतको म्युजिक भिडियो लगातार युट्यूबको ट्रेंडिंगमा परिरहेको छ । सो भिडियोमा हट नायिका एवम् मोडल...
लोकप्रिय बन्दै भागिरथको ‘कहिले बोल्छ देश ?’ (भिडियोसहित)
काठमाडौं । लोक तथा दोहोरी गायक भागिरथ चलाउनेको ‘कहिले बोल्छ देश ?’ बोलको गीतले राम्रो प्रतिक्रिया पाएको छ। यो समाचार तयार पार्दा सम्म १ लाख २२ हजार दर्शकको नजरमा परेको छ । गीतमा गायक चलाउने र गायिका शान्ती श्री परियारको आवाज रहेको छ । गीतमा शब्द र संगीतपनि चलाउनेकै रहेको छ । हत्या, बलात्कार, चोर...
‘जाम क्यारे माया’ को चर्चा, भिडियो ट्रेन्डिङमा
काठमाडौँ । चर्चित गायिका मेलिना राईसँग लोकपप गायक सुनिल गिरीको नयाँ कौरा गीत ‘जाम क्यारे माया’ यतिबेला युट्युब ट्रेन्डिङमा छ । गायक गिरीकै शब्द तथा संकलन रहेको गीतमा गाउँ घरमा खेलीने कौराको दृश्य र युवा युवतीको ब्यग्यात्मक शैलीलाई गिरीले देखाउन खोजेका छन् । भिडियोमा सुनिल गिरी स्वयंम र उर्मिला ...
केकी अधिकारीको पर्खाइको कथा(भिडियो सहित)
शनिबार, आश्विन २५, २०७६
काठमाडौँ । नेपाली सिने उद्योगमा चलेकी अ‍ेभिनेत्री हुन्– केकी अधिकारी । जीवन्त अभिनय गर्ने केकी अधिकारी यतिबेला भने आफ्नो मान्छेको पर्खाइमा थाकेर रु“दै गरेकी भेटिएकी छिन् । आफूले माया गरेको मान्छेको पर्खाइमा रु“दै गरेको केकी अधिकारीको यो भावुक दृष्य गायिका दुर्गा खरेलको पछिल्लो गीतको म्यूजिक भिडियो...
आयो बुद्ध लामाको नयाँ गीत, ‘आफुभन्दा जेठी…….’ (भिडियोसहित)
बुधबार, आश्विन ०८, २०७६
काठमाडौँ । नेपाल आईडल बिजेता बुद्ध लामाको नयाँ गीत "आफु भन्दा जेठी " सार्वजनिक भएको छ। मनोज सिग्देल (युरेश) को शब्द् र संगीतकार दिपक आर्जेको संगीत रहेको यस गीत लाई नेपाल आईडल फेम गायक बुद्ध लामाले गाएका छन्। मनोज सिग्देल (युरेश) को लगानीमा निर्माण भएको भिडियो निकै आर्कषित बनेको छ। गीतकार स...
सुनिताको ‘मेरो प्यारा’ (भिडियोसहित)
काठमाडौं । गायिका सुनिता थेगिमको स्वरमा ‘मेरो प्यारा’ बोलको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । उक्त गीगमा डीआर अटुको शब्द तथा सङ्गीत संयोजनमा रहेको गीतको भिडियोमा मायाका नवीन यात्राहरूलाई गीतमा समेटिएको छ । गीतको भिडियोलाईको आशिक जगेवुले छायाँकन, तथा सम्पादन गरेका छन् । उक्त गीतको भिडियोलाई लिम्दुमी ...
रिमाको ‘तिम्रो त्यो नसालु’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
काठमाडौँ । 'तिम्रो त्यो नसालु' बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । सन्तोष कालिकोटेको शब्द, सङ्गीत तथा स्वर रहेको गीतमा एरेन्ज भने रिकेश गुरुङको सुन्न सकिन्छ । गायक कालिकोटेको यसअघि 'छटपटि' 'गुन्द्रुक मिठो', जालैमा जालैमा लगायतका गीतहरु चर्चित रहेका थिए । रोमान्टिक शैलीमा बनेको गीतलाई निशान घिमिरे कस्...
यस्तो छ कमेडीले भरिपूर्ण ‘जात्रै जात्रा’ को ट्रेलर (भिडियो)
काठमाडौं । यस वर्षको प्रतीक्षित फिल्म ‘जात्रै जात्रा’ को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । ट्रेलरलाई शुक्रवार युट्युबमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । दयाहाङ राई, विपिन कार्की, रविन्द्र झा, वर्षा राउत, रविन्द्रसिंह बानियाँ लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको फिल्मको ट्रेलरमा प्रशस्त कमेडी देख्न सकिन्छ । ट्रेलरमा सबै...
आयुष्मानले प्रिय‌कालाइ भने, ‘अर्को जुनी खै कुन्नि कसलाइ थाहा छ र खै ?’ (भिडियोसहित)
अर्को जुनी खै कुन्नि कसलाइ थाहा छ र खै यही जुनीमा ..... पुरा भिडियो हेर्नुहोस् । https://www.youtube.com/watch?v=HOawpgQBoWE
तिमी नै हौ, सँगै जिउने सँगै मर्ने साथी…. (भिडियोसहित)
समीर लिम्बुको मायामा…….(भिडियोसहित)
पलले आँचललाइ भने, ‘जाउँ हिड…….(भिडियोसहित)
"Jau Hida"- New Nepali Song || Paul Shah, Aanchal Sharma || Biku Chhetri || Gamvir Bista https://www.youtube.com/watch?v=rJupEZznjZw
म जुन दिनदेखि तिम्रो राजा बनेँ, तिमी बन्यौ रानी…..(भिडियोसहित)
म जुन दिनदेखि तिम्रो राजा बनेँ, तिमी बन्यौ रानी.....(भिडियोसहित) https://www.youtube.com/watch?v=JJCYbJB-sHQ
के सुमित बन्लान् त नेपाल अाइडल ?
काठमाडौँ । गायन रियालिटी सो नेपाल आइडलमा सबै प्रतिस्पर्धीहरुको प्रस्तुतीमा स्रोता, दर्शक मनमोहित हुनु स्वभाविक हो । तर, नेपाल आइडलले खोजेको बेजोड गायकी पनि हो, र यसमा अगाडि देखिएका छन् सुमित पाठक । नारायण गोपाल, बच्चु कैलाशका गीतहरुलाई समेत सजिलै गायर उनले आफूलाई अब्बल दर्जाको गायकका रुपमा प्रस्तु...
झुमा वनेम लिम्बुले यसरी गाइन् हाक्पारे (हेर्नुहोस् भिडियो)
जिएम राईको ‘माया तिमी . .’ स्क्रिनमा (भिडियोसहित)
भीम देवान, काठमाडौं । गायक जिएम राईको पहिलो गीत ‘माया तिमी’ लाई अब स्क्रिनमा पनि हेर्न सकिने भएको छ । केही दिनअघि गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ । म्युजिक भिडियोमा निराजन प्रधान र रेखा फागो लिम्बुलाई मायालु जोडीको रुपमा देख्न सकिन्छ । गीतको शब्द र संगीत दुवै टिका बम्जनको रहेको छ । ...
Aaja Hamro Bhet Bhako Dina – The Break Up Movie Song || Aashirman Ds Joshi, Shilpa, Raymon, Saroj
मेलिना राईको ‘वैंशै बेइमानी’ सार्वजनिक, वैंशै बेइमानी भन्दै यसरी नाचिन् मेलिना (हेर्नुहोस् भडियो)
बिहिबार, कार्तिक ०८, २०७५
काठमाडौं । गायिका मेलिना राईको स्वर रहेको नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ। बिहिबार गायिका मेलिनाकै अफिसियल युट्युब च्यानल 'मेलिना राई'बाट 'वैंशै बेइमानी' बोलको गीत सार्वजनिक गरिएको हो। तिहारलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक गरिएको उक्त गीत पुर्वेली मारुनी भाकामा तयार पारिएको छ। राजुबाबु श्रेष्ठको शब्द समावेश उ...
निशान भट्टरार्इको नयाँ गीत
बिहिबार, भाद्र २८, २०७५
काठमाडाैं - पत्रकार ऋषि धमलाको सबल र दूर्बल पक्षलार्इ समेटेर तयार पारिएकाे ‘धमला धमला ऋषि धमला’ बाेलकाे गीत सार्वजनिक भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी गीत सार्वजनिक गरिएकाे हाे । हाइलाईट्स नेपालको यूट्यूब च्यानल मार्फत् सार्वजनिक गरिएको गीतको म्यूजिक भिडियो अहिलेसम्म झण्डै २२ हजार ५...
अाँखाको नानीभित्र लुकाएर राख…
लेखेँ एउटा गीत मैले, तिमीलार्इ भनी…..
राजा बनाउँला, दिलमा सजाउँला….
सर्बोत्कृष्ट लोक पप गीतको सूचीमा इन्जिनियर श्रेष्ठको ‘घर हाम्रो लेकैमा’ पनि (भिडियो सहित)
लक्ष्मी धिमाल काठमाडौं । बिगत लामो समय देखि नेपाली गीत संगीत र सत्य , तथ्य खबर सम्प्रेसन गर्दै आएको नेपाली अनलाइन पत्रिका `ओएसनेपाल डटकम´ले आयोजना गर्दै आईरहेको ओएसनेपाल म्युजिक अवार्डको दोश्रो सस्करणको टप ५ का नामावली सार्बजनिक भएको छ । जस्मा सर्बोकृष्ट लोकपप गीतको बिधामा गायक बिरेन्द्र श्रेष्ठको...
अादत- नयाँ नेपाली म्युजिक भिडियो, हेर्नुहोस् : सुमन केसी, पल शाह, सन्ध्या केसी
मुसाको सिकार : दिन पनि कट्ने, छाक पनि टर्ने (भिडियो कथा)
पूर्वी झापाको ज्यामिरगढीका धेरै बासिन्दा चिया बगानमा काम गर्छन् । त्यहीँको बेन्डी वस्तीका सन्थाल आदिवासीको गुजारा गर्ने ठाउ पनि चिया बगान नै हो । तर सन्थाल आदिवासीका पुरुषको मन चिया बगानमा भन्दा मुसाको सिकारमा रमाउछ । https://www.youtube.com/watch?time_continue=482&v=8PKfftxI3yY गाउँमा कसै...
Priyanka Karki’s FAST FAST | Official Music Video | ft.Sunil Chhetri by Shankar Smile/Sumi Chamling
AAKHA LAUCHHAN/Latest Nepali Lok pop Song 2018/Birendra Shrestha/Melina Rai/Ft: Supriya / Nipun
नयाँ वर्षमा ‘अाँखा लाउछन’ सार्वजनिक
शनिबार, बैशाख ०१, २०७५
नयाँ वर्षको अवसर पारेर भावसागर ईन्टरटेन्टमेन्टले ‘अाँखा लाउछन’ बोलकाे म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक गरेको छ । वरिष्ठ गीतकार अम्बिका गुरुङको शब्द अनि शंकर थापा (स्माईल) को संगितमा तयार पारिएको उक्त गीतलाई मेलिना राई र वीरेन्द्र श्रेष्ठले गाएका छन भने एरेन्ज उदयराज पौडेलले गरेका हुन। संजय बरालको निर्देशनमा...
Jaula Relaima – Kamal Khatri ft. Simpal Kharel || New Nepali Song
बिहिबार, फाल्गुण ०३, २०७४
Kasim – Kamal Khatri ft. Simpal Kharel || New Nepali Song
LILY BILY – Title Song- GHUMNA JAU ENGINE GADIMA |
Aba Mann Sanga Mann | New Nepali Movie KOHALPUR EXPRESS Song 2018 |
चारै तिर मैले चाहारेँ तिमीलार्इ………
समाज सेवा गर्दैछु भनेर साँच्चै हो कि, हल्ला सुनेको ? : राधिका पोखरेल (भिडियो सहित)
लाग्छ समावेशी लोकतन्त्र सायद यही रहेछ ।। गजल ।। दिपक कट्टेल ।।
बेनिशा हमालको मन उड्यो……
शनिबार, पौष २९, २०७४
चुनाव हारेपनि जिल्लाकाे विकास र समृद्धिका लागि निरन्तर लागि पर्छू : राज्यमन्त्री गुरुङ (भिडियो सहित)
तेह्रथुम । तेह्रथुमबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा पराजित कांग्रेस नेतृ सीता गुरुङले चुनाव हारेपनि जिल्लाकाे विकास र समृद्धिका लागि निरन्तर लागि पर्ने बताउनुभएको छ । परिणाम सार्वजनिक भएपछि सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै गुरुङले यसो भन्नुभयो । भिडियो हेर्नुहोस् । https://www.youtube.com/watch?v=g3Ve8QE...
पत्रकार टिअार सुब्बा अब अभिनयमा पनि, पहिलो म्युजिक भिडियो सार्वजनिक (भिडियोसहित)
गुराँस न्युज । तेह्रथुम । तेह्रथुममा रहेर पाँच वर्ष यता पत्रकारितामा क्रियाशील टिअार सुब्बाको पहिलो म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । सुब्बाले अभिनय गरेको 'चासोक तङनाम पहिलो भेटमा' बोलको गीतको म्युजिक भिडियो युवटुवमार्फत सार्वजनिक भएको हो । गीतकार तथा मोडल विष्णुकुमार इङनामको पहिलो भिडियो एल्बम ...
बिष्णुकुमार इङनामको ‘यो जीवन’ सार्वजनिक (सबै भिडियोसहित)
काठमाडौ , ९ मंसिर । गीतकार बिष्णु कुमार ईङनामको एकल गीति एल्वम् “यो जीवन” को म्युजिक भिडियो सनिबार काडमाडौमा सार्वजनिक गरिएको छ । बिभिन्न कथाबस्तु तथा बिषेशता बोकेका ६ वटा गितहरु समावेस भएको एल्वम्को नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पुर्व कुलपति बैरागी काईलाले एक औपचारिक कार्यक्रमका बिच बिमोचन गर्नुभएको...
पुष्पराजको लचक्क लचक्क…..
सेक्सी चन्दाको कम्मर लच्किएपछि….(भिडियो सहित)
काठमाडाैँ । नेपाली लोक गितको विधामा सधर्षरत गायक प्रशान्त ओलीको सुमधुर अवाजमा एकल एल्बम लचक्क कम्वर आजबाट बजारमा प्रियसी म्युजिक प्राली मार्फत सार्वजनिक भएको छ । माया प्रेमका भावलाई रोमान्चक रुपमा गितको भिडियोमा समेटिएको छ । सुन्दर रुपमा रहेकी चन्दा दाहाललाई पश्चिमको मायालुले आफनो प्रेमीका बन्नको ल...
यही हो मेरो तेह्रथुम जिल्ला…….
भाइरल बन्दै विरेन्द्रको ‘घर हाम्रो लेकैमा’